Fanabeazana · Avrily, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Fanabeazana · Avrily, 2018
Tantara mikasika ny Fanabeazana tamin'ny Avrily, 2018
Amerika Avaratra 27 Avrily 2018
Azia Atsimo 27 Avrily 2018
Tamin'ity herinandro ity dia nijery ireo lahatsoratra mahaliana avy tao amin'ny vehivavy mpitoraka blaogy ao amin'ny Nari Jibon izahay. Niresaka mikasika ny fandrahonana amin'ny vodiondrim-panambadiana izy ireo, izay manasarotra ny fiainan'ireo fianakaviana mahantra, amin'ny fanerena ny ray aman-dreny hihevitra ireo zanaka vaviny ho toy ny enta-mavesatra. Ary koa, ny nofinofin'ny mpandray anjara iray tao amin'ny NJ ny ho lasa filoha sy hanova ny fiarahamonina ankehitriny ho mazava kokoa, hanam-pahaizana ary tsy hisy vodiondry haneren'ny fiarahamonina.
Amin'ny 2050, ny mponin'ny tanibe Afrikàna irery ihany no hitombo avo roa heny.
Miteraka Fandraràna ny 3G Ao Kambodza Ny Fahatahorana Sary Vetaveta
Azia Atsinanana 19 Avrily 2018
Nitarika ny fangatahan'ireo vadinà tomponandraiki-panjakana hanao fanangonan-tsonia hanakanana ny teknolojia vaovao 3G ny tahotra ny fiparitahan'ny sary vetaveta manerana ny finday azo hijerena lahatsary.
Ejipta 16 Avrily 2018
Ity lahatsoratra ity dia nadikan'i David Faure, mpianatra kilasy fanomanana ECT2 ao amin'ny Lisea Ozenne de Toulouse, eo ambany fanarahamason'ny profesorany Audrey Lambert, izay ao anatin'ny tetikasa momba ny fanabeazana "Fidirana amin'ny fandikan-teny ny vaovao malaza".
Niteraka Aingam-panahy Tao Amin'ny Media Sosialy Ilay Renim-pianakaviana Nanala Fanadinana Niaraka Tamin'ny Zanany Roa Volana
Azia Afovoany sy Kaokazy 05 Avrily 2018
"Afaka roapolo taona, hahita ity sary ity ao Afghanistan tsara kokoa ity zaza ity."
Kazakhstan: Ala Hamohamo sy Politika
Azia Afovoany sy Kaokazy 02 Avrily 2018
'Tonga dia niaraka nampiseho ilay hafatra ''Ndao hanao firaisana'' daholo ireo efitra fianarana 900. [...]Tsy niseho ilay Praiminisitra... ''
Però: Manentana Momba Ny Olan'ny Rano Ny Mponin'i Lima
Amerika Latina 01 Avrily 2018
Ny 18 aprily 2010, natao manerana izao tontolo izao ny Dow Live Earth Run for Water. Ahitana andiana hazakazaka/mandeha miadana amin'ny halavirana 6 km ity hetsika ity, izay mampiseho ny halavirana antonony handehanan'ny vehivavy sy ny ankizy isan'andro mba hahazoana rano